ခင် မောင် စိန် သည် မတ် 1, 2013 က 11:58amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အားကြီးတဲ့ စေတနာ ဖြူစင် နှလုံးသားဖြင့် လှူ ဒါန်းကြသူတွေ မြတ်ဒါနကြောင့် ဘဝစိုပြေ ရိက္ခာအပြည်နဲ့သိက္ခာရှိသူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျား သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကွယ်
ခင် မောင် စိန် သည် မတ် 1, 2013 က 11:43amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
May all beings in suffering be liberated from suffering.
May all beings in danger be liberated from danger.
May all beings in sorrow be liberated from sorrow.
မောင်သိန်းထိုက် သည် အောက်တိုဘာ 13, 2012 က 1:49amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
1။ ငါဟုခေါစရာ ဤခနွာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
ဘေးရန်ပယ်ရှင်း စိုးရိမ်ကင်း ဆင်းရဲမရှိဖြစ်ပါစေ။
2။ မာတာပိတာ ဤနှစ်ဖြာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
3။ အာစရိယ သင်ဆရာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
4။ ဉာတိမေတ္တာ ဆွေသဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
5။ ကိုယ်မှာစောင့်လာ နတ်ဒေဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
6။ အိမ်ခြံစောင့်လာ နတ်ဒေဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
7။ မြို့ရှာစောင့်လာ နတ်ဒေဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
အမျှ.အမျှ.အမျှ ယူတော်မူကြပါခင်ဗျား (သုံးခေါက်ဆိုရန်)
သာဓု.သာဓု.သာဓု ယူတော်မူကြပါခင်ဗျား (သုံးခေါက်ဆိုရန်)
maylay သည် အောက်တိုဘာ 11, 2012 က 2:15pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ၌ကျင်လည်ကြကုန်သော လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်း
ဝေနေယျ၊ သုခိတ၊ ဒုက္ခိတ သတ္တဝါ အပေါင်း
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိ၏ ခန္ဓာဝန်ကိုရွက်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ.....
Moe Chee သည် စက်တင်ဘာ 1, 2012 က 11:36pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
Moe Chee သည် စက်တင်ဘာ 1, 2012 က 11:17pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာပို့ ကိုကူးယူ၍ သွးပါသည်။ post ပိုင်ရှင်များလည်း
သမီးတော် သည် ဇူလှိုင် 30, 2012 က 8:26pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
........ကောင်းသောလိုရာဆန္ဒများစွာဖြင့် .......ပြည့် စုံနိုင်ကြပါစေသတည်း။။။။
မေနိုဗယ် သည် ဇူလှိုင် 4, 2012 က 1:22pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
၄.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ.တွင် မေတ္တာပို.သခဲ့ပါတယ်။စင်္ကြာဝဋ္ဌာအနတ္တတွင်ရှိကြကုန်သော နတ် လူ သတ္တ၀ါ အားလုံးတို.သည် ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်း၇ဲကင်းပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြပါစေ။
phyuthi သည် ဇွန် 21, 2012 က 11:11pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
စကြ၀ဠာ အနန္တ၌ရှိကြကုန်သော လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တ၀ါအားလုံး စိုးရိမ်၊ ကြောင့်ကျကင်းကြပါစေ၊။ ကိုယ၊ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။
wai mon သည် ဇွန် 19, 2012 က 5:25pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ.....